महिलाको स्तन र पुरुषको दाह्री मात्रै हैन, विहे नगरे पनि कर लाग्ने ! | Rajmarga
महिलाको स्तन र पुरुषको दाह्री मात्रै हैन, विहे नगरे पनि कर लाग्ने !
नेपालमा अहिले स्थानीय सरकारले बढाएको करको दर र दायरा चर्चाको विषय बनेको छ । थोरैमात्र यस्ता स्थानीय तह छन् जसले करको दर र दायरा बढाएका छैनन् । होइन भने अधिकांश स्थानीय तहले करको दर सयौ गुणा बढाएका छन् । राँगा भैंसीदेखि खसी बोका, कुखुरादेखि अण्डासम्ममा स्थानीय तहले कर लगाएका छन् । नेपालका स्थानीय तहले लगाएका कतिपय कर शायद विश्वका अन्य देशका मानिसका लागि आश्चर्यको विषय बन्न सक्छ ।
तर इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने शासकहरुले अनौठा–अनौठा विषयमा कर लगाएका थिए । जुन अहिले पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ ।
इङल्यान्डमा हेनरी आठौं, उनकी छोरी एलिजाबेथ प्रथम र रुसका पीटर द ग्रेटले दाह्रीमा कर लगाएका थिए । त्यस्तै बिलियम तृतीयले झ्यालमा कर लगाएका थिए भने हेनरी प्रथमले इग्ल्याण्डका लागि लड्न नचाहे सर्वसाधारणलाई पनि कर लगाएका थिए ।
यस्तै, रुसका पीटर द ग्रेटले त आत्मा छ भनेर एकीन गर्नेहरुमाथि पनि कर लगाएका थिए । यसको उल्टो जो आत्मा छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन्थे उनीहरुमाथि पनि कर लगाइएको थियो । उनीहरुलाई धर्ममाथि विश्वास नगरेको भन्दै कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जर्मनीमा यौन व्यवसायलाई कानूनी मान्यता दिइएको छ । तर, सरकारले सन् २००४ देखि यौन व्यवसायमा पनि कर लगाएको छ । यसमा संलग्न व्यक्तिले महिनाको १५० यूरो कर तिर्नुपर्छ । जर्मनीमा यौन व्यवसायमा लगाइएको करबाट मात्रै वार्षिक १० अर्ब युरो आम्दानी हुने गरेको छ ।
के स्तनको पनि कर तिर्नुपर्ला ? इतिहासमा यस्तो पनि भएको छ । कर संकलन गर्नेहरुले स्तन नापेर कर लिने गरेका थिए । एक युवतीले आफ्नो स्तन नै काटेर संकलकको हातमा राखेपछि यो रोकिएको थियो ।
यस्तै अनौठो उदाहरण अर्को पनि छ । इग्ल्याण्डमा जुलियस सीजरले र रुसमा पीटर द ग्रेटले अविवाहित पुरुषहरुबाट पनि कर लिएका थिए । २१ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका अविवाहित पुरुषबाट कर लिने गरिएको थियो । अहिले शरीरका बिभिन्न भागमा टाटु बनाउन युवायुवती लालयित हुन्छन् । अर्केन्सस्मा शरीरमा टाटु बनाउदा कर लिने गरिन्छ ।
पाकिस्तानमा विद्यार्थीले पढेवापतक कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै विद्यार्थीले दुई वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी पढाइमा खर्च गरे ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
भर्खरै चीनमा पनि करको एउटा विषयले हंगामा भइरहेको छ । चीनका केही विज्ञले बच्चा नजन्माउने विवाहित जोडीमाथि कर लगाउन सुझाव दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
Previous post: बिहेको मुखमा प्रियंकाको करिअर संकटमाः घरको न घाटको भएपछि गरिन् आत्मसमर्पण
Next post: मध्य सेप्टेम्बरमा अष्ट्रेलियको ओसेनियामा विज्ञ सम्मेलन हुने
अनौँठो देश, जहाँ आफ्नै छोरीसँग बिहे गर्न पाइने कानुन छ
मातापितासँग जिद्दी गरेर १० वर्षे बालिकाले स्मार्टफोन त पाइन् तर…
अनौठो कपडा, महिलामाथि गिद्धेदृष्टि लगाउने पुरुषलाई ठाउँको ठाउँ पार्ने
१२ वर्षअघि हराएको सामान हाच्छिउं गर्दा नाकबाट निस्किएपछि…
साउदी राजकुमारले किम कार्दशियनलाई एक रातकालागि ७ करोड अफर गरेका थिए